ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သော“ အုပ်စုလိုက်အနေအထား” စာတမ်းကိုဖျက်သိမ်းခြင်း (နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ (အပြုသဘောဆောင်သည့်လိင်မှုဆိုင်ရာစင်တာ၊ လိင်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာလိင်ကျန်းမာရေးသုတေသနမဟာမိတ်အဖွဲ့) သည်အဖွဲ့လိုက်အနေအထားစာရွက်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး“ မကြာခဏလိင်အပြုအမူနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုဆန့်ကျင်သည်။ ။ " အုပ်စုများ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်ဆန့်ကျင်အနေအထားကြေညာချက်သူတို့၏အရင်းခံကရှင်းပြသည်:
"ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ AASECT ရဲ့ကြေညာချက်ကိုသူတို့ရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်အတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြပြီးဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုငြင်းပယ်တဲ့သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများစွာကိုကိုးကားပါတယ်။ "
ဤ PR ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ “ စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုငြင်းပယ်သည့်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာခြင်းများ” မရှိပါ။ ASSECT ၏ကြေငြာချက်တွင်၎င်းင်း၏ကိုယ်ပိုင်အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများကိုအထောက်အကူပြုရန်လေ့လာမှုများမရှိပါ။3kink အဖွဲ့အစည်းများ၏ကြေငြာချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ သူတို့၏“ သက်သေအထောက်အထားများ” (အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ကြည့်သည်) ကိုဤ PDF ဖိုင်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ Porn / လိင်ရာထူးဖော်ပြချက်မှစွဲလမ်း.
နောက်ထပ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတွန်းအားပေးရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ AASECT ကဲ့သို့ပင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲ ICD-11၊ တစ်ရောဂါလည်းပါဝင်သည် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ။ " ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်လာသော“ Compulsive Sex Behaviour Disorder” (CSB) သည်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုခွဲခြားသိမြင်စေရန်ထီးအဖြစ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ အချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းများက၎င်းအားသူတို့၏အပြုအမူအားတိုက်ခိုက်ခြင်းအဖြစ်မမှန်မကန်ယူမှတ်ကြသည်။ မဟုတ်ဘူး။
ယခုဤကမ်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ထွက်တွန်းခံရအခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင် "astroturf" ခုခံထုတ်လုပ် ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှုအတွက်လက်ရှိကြေညာချက်သည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထောက်ခံမှုအားနည်းသောလေ့လာမှုတစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်သာမှီခိုနေပြီးအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၅၀ ကျော်ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလျစ်လျူရှုထားသည်။ အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ အဆိုပါစွဲမော်ဒယ်။ ပိုပြီးအဘို့, ဤဆောင်းပါးကိုတွေ့မြင်: ဘက်လိုက်မှုဆောင်းပါးများအသိအမှတ်ပြုဖို့ကိုဘယ်လို: ချန်လှပ်ကျော် 2015 အာရုံကြောလေ့လာရေး Porn စွဲပံ့ပိုးနေချိန်မှာသူတို့ဟာ Prause et al 50 (မဟုတ်မမှန်ဟုဆိုကာက porn စွဲ debunks) ဖျော.
ကကိုးကားခဲ့ပါဘူးလေ့လာမှုအများအပြားအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်စဉ်အခါ, စာပေအချို့ကို 50 သက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များချန်လှပ်သောကွှေးကျွောခွငျးရဲ့အဖွင့်အပိုဒ်, နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။
အချို့ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစီရင်ခံစာများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ခံသော်လည်း (ဥပမာ - Hilton & Watts, 2011; Kafka, 2010), အခြားသူများကမူစွဲလမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောအလားအလာများသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ပြသနာများကိုထောက်ပြသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်စံပြ (Ley, 2012; Ley, Prause, & Finn, 2014; Reid & Kafka, 2014; Giugliano, 2009; Hall, 2014; Karila et al ။ , 2014; Moser, 2013; Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013; Ley et al ။ , 2014; Prause & Fong, 2015; Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak, 2015)
54 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neurospychological, ဟော်မုန်း, မျိုးဗီဇ) အစွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
မကြာသေးမီစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်မှတ်ချက်အ 30 ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့တို့က, အစွဲမော်ဒယ် supporting ။
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 55 လေ့လာမှုများကျော်။ စက်လှေကား, သည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာတစ်ခုစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အားကြီးသောညွှန်းကိန်းရှိပါသည်။
porn အသုံးပြုမှု / လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့။ ဟိ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်လေ့လာမှုများ causation သရုပ်ပြပထမဦးဆုံး7ကိစ္စတွင်, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 80 လေ့လာမှုများကျော်.
ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလေ့လာမှု ၄၀ ကျော်.
လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအလွန်မြင့်မားသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစွာလေ့လာမှုများမှ ၂၅ ခုကျော်လေ့လာမှုများက
ယင်းနောက်ရဲ့ကွှေးကျွောခွငျးရဲ့သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုကိုကြည့်ကြကုန်အံ့ ၎င်း၏ကြေညာချက်အဘို့အ "ကြောင်းအခြားသူများကိုအလေးအနက်အလားအလာသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲမော်ဒယ်လျှောက်ထားအတူပြဿနာတွေနဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ထောက်ပြ":
1) Ley, 2012ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိ။ စာအုပ်ပဲ လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2) Ley, Prause, & Finn, 2014: အသေးစားဂျာနယ်အားဖြင့်ပြန်တမ်းတစ်ခုထင်မြင်ချက်အပိုင်းအစ (လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ) ။ ဦးဆောင်ရေးသားသူကိုမဆိုမူရင်းသုတေသနထုတ်ဝေဘယ်တော့မှထားပြီးဖြစ်သော်လည်း, ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်စွဲသူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ လုနီးပါးသဘောထားအပိုင်းအစအတွက်ဘာမျှမကကိုးကားလေ့လာမှုအားဖြင့်ဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေပါတယ်။ ဤ ကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုတည်ဆောက်မှု Ley et al ။ , 2014 - ပြောဆိုချက်ကိုအားဖြင့်ပြောဆိုချက်ကို နှင့်စာရေးသူကိုးကားသုတေသန၏မှားယွင်းစွာတင်ပြများစွာပါရှိသည်။ အဆိုပါ Ley စက္ကူအများဆုံးတုန်လှုပ်ဖွယ်ရှုထောင့်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်တွေ့ရှိခဲ့ porn စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံသမျှသောများစွာသောလေ့လာမှုတွေချန်လှပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါ့အပြင်သင်သိရ လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ ရှိပါတယ် တိုတောင်းတဲ့ခြင်းနှင့်ကျောက်တောင် သမိုင်း။ ဒါဟာ 2004 အတွက်ထုတ်ဝြေခင်းစတင်ခဲ့, ပြီးတော့သာ 2008 အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေမည်အကြောင်း, 2014 အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးသွားရုံအချိန်အတွက် Ley feature ရန် et al။ ရဲ့ "ပြန်လည်သုံးသပ်။ "
3) Reid & Kafka, 2014: ဒီစက္ကူ hypersexuality အဆိုပါ DSM-5 (သို့လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ hypothesizesdiagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်) ။ သို့သော် Reid နှင့် Kafka နှစ် ဦး စလုံးသည်ပါ ၀ င်မှုအတွက် hypersexuality ကိုနှစ်သက်သည် DSM။ Rory Reid ဖွငျ့ဤ 2012 UCLA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်ပါ: သိပ္ပံတရားဝင်ရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲထောက်ခံပါတယ်။
4) Giugliano, 2009: ဒီအဟောင်းစက္ကူ, ခါးပန်းတစ်အတိတ်သမ္မတအသုံးပြုပုံလိင်စွဲမေးခွန်းထုတ်ထွက်သတ်မှတ်ထားပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုရေးသားသူရဲ့ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်နေရာမှာကလိင်စွဲလမ်းမတည်ရှိပါဘူးကြောင်းအကြံပြုထားဘူး။ ယင်းကိုကြည့်ပါ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်ခါးပန်းအနေအထားစက္ကူ။
5) ခန်းမ, 2014- ယူကေကုထုံးပညာရှင် Paula Hall မှဤဆောင်းပါးသည်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုထောက်ခံသည်။ Paula Hall ကဒီ TEDx ဟောပြောချက်ကိုကြည့်ပါ - ကျနော်တို့လိင်စွဲလမ်းအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်.
6) Karila et al ။ , 2014: ဒီစက္ကူလိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုထောက်ခံပါတယ်။ ယင်းစိတ္တဇထံမှ"ထို့အပြင် hypersexual ရောဂါအဖြစ်လူသိများသောလိင်စွဲလမ်း, အဓိကအားဖြင့်အခြေအနေကိုများစွာသောလူများအတွက်လေးနက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များကလျစ်လျူရှုထားပြီး။ "
7) တခု, 2013: ချားလ်စ်တခုသံသယရှိတဲ့လူသိများ "လိင်စွဲလမ်း" ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့၏ပုဒ်မအယ်ဒီတာအဖြစ် လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ, သူသည်အထက်ဆှေးနှေးခဲ့သူတို့ရဲ့ Pseudo-ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ဖို့ Ley, Prause နှင့်ဖင်လန်ကိုဖိတ်ကြားသူတစျဦးဖွစျသညျ Ley et al ။ , 2014 ။
8) Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013။ ဤစာတမ်းသည်လိင်စွဲခြင်း၏တည်ရှိမှုကိုထောက်ခံသည်။ နိဂုံးချုပ်မှ -အများကြီးကွာဟချက် HD ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ပညာ၌သိကျွမ်းခြင်း၌မတည်ရှိပေမဲ့လည်းရရှိနိုင်သည့်ဒေတာတစ်ခုစွဲမူဘောင်အတွင်း hypersexuality ရောဂါစဉ်းစားသင့်လျော်သောနှင့်အထောက်အကူဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။"
9) Ley et al ။ , 2014: #2 အဖြစ်တူကိုးကား။
10) Prause & Fong, ၂၀၁၅ ဤအကြောင်းအရာသည်သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာ chronicling မှမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်အများကြီးအရာတစ်ခု Lay အသံအတိုးအကျယ်အတွက်တိုတောင်းတဲ့အမြင်အပိုင်းအစရဲ့ Prause ရဲ့သားကောင်များ၏ဒဏ္myာရီ.
11) Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak, 2015: တစ်ဦးကတစ်ခုတည်း EEG လေ့လာမှု။9peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများထက်လျော့နည်းခြင်းမရှိပါကဒီစက္ကူကြောင်းဆိုသည်ကား, Prause et al။ , 2015, ထို့အပြင်မော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားသည်: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015။ ဤအ9စာတမ်းများပြည်နယ်ပေါ်တွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကြောင်း Prause et al။ အမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ desensitization / လေ့ (စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း), အဖြစ် နည်းသော vanilla porn (ဓာတျပုံ) မှဦးနှောက်ကို Activation မှဆက်စပ်ခဲ့သည် သာ. ကြီး porn အသုံးပြုခြင်း။
ဒီတော့ဒီအဖွဲ့အစည်း (၃) ခုရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်အထောက်အထားကိုအကျဉ်းချုံးကြည့်ရအောင်။
တကျိပ်တပါးသောကိုးကားကိုးကား အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ အဆိုပါစွဲမော်ဒယ်,
ကျန်ရှိနေသောကိုးကားချက်သုံးခုမှာညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုများကိုပေါင်းစပ်ထားသူ ၃ ဦး မှဖြစ်သည်။ David Ley, နီကိုးလ် Prause နှင့်ချားလ်စ်တခု။ Ley နှင့် Prause ရေးသားခဲ့သည် Ley et al ။(တခုပြန်တမ်းအရာ), 2014, နှင့်အနည်းဆုံးနှစ်ခု စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ (Ley ကိုယခုအခါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော xHamster ကပေးနေသည် ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်) ။ Charles Moser သည် Ley နှင့် Prause တို့နှင့်ပူးပေါင်းကာ porn စွဲလမ်းမှုကိုပြေပျောက်စေခဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 ISSWSH ညီလာခံ။ သူတို့ကတစ်ဦး2နာရီစာတမ်းဖတ်ပွဲတင်ဆက်: “ စွဲလမ်းမှု၊ လိင်စွဲမှုသို့မဟုတ်အခြား OCD တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်?” ကျန် ၃ ယောက်အနက်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုPrause et al။ , 2015) ကိုအုပ်စုတူအဆင့်တူပြန်လည်သုံးသပ်သောစာတမ်း ၉ ခုကမှတ်ယူသည် နှင့်ကိုက်ညီ အဆိုပါစွဲမော်ဒယ် (ပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများအတွက်လေ့) ။
အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါကြေညာချက်မဆိုကိုးကားခဲ့ပါဘူး 30 စာပေ & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၏မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ယေးလ်တက္ကသိုလ်, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှအလုပ်လုပ်ထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့အသုံးပြုပုံ Duisburg-အက်ဆင်းဒါမှမဟုတ်မက် Planck အင်စတီကျု၏တက္ကသိုလ်? အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ဤအဖွဲ့အစည်းများ၏တောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်ခြင်း, စွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
A, B, C, D, အီး: အဆိုပါကွှေးကျွောခွငျးငါးခုကဏ္ဍများသို့ယင်း၏တောင်းဆိုမှုများ၏ကျန်အပိုင်းသုံးပိုင်း
အဆိုပါကွှေးကျွောခွငျးရဲ့ပထမဦးဆုံးအဓိကအခိုင်အမာအရေးဆိုမှု (A) ကို
တစ်ဦးက) ကအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (ယား) စိတ်ရောဂါအဖြစ်လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲခွဲခြားသတ်မှတ်မထားဘူး။ အလားတူပင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေး, အတိုင်ပင်ခံနှင့်အထူးပြုကုသ (AASECT) ၏အမေရိကန်အသင်းကစိတ်ရောဂါအဖြစ်လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲအသိအမှတ်မပြုပါဘူးနှင့်တစ်ဦးစွဲမော်ဒယ် "လိင်ပညာရေးပေးပို့ဘို့အလေ့အကျင့်တစ်ခုစံအဖြစ်ချီတက်မရနိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချထားပါတယ်, အကြံပေးခြင်း, ဒါမှမဟုတ် ကုထုံး "။
AASECT Re: အ ပထမဦးစွာ AASECT တစ်သိပ္ပံနည်းကျအဖှဲ့အစညျးမဟုတျပါဘူးနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအခိုင်အမာထောက်ပံ့ပေးရန်ဘာမျှမကိုးကား - ၎င်း၏ထောက်ခံမှုအနတ္တ rendering ။
အာရုန်သည်ဤသည်၌ဝန်ခံအဖြစ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ AASECT ရဲ့ကွှေးကျွောခွငျးမိုက်ကယ်အာရုန်နှင့်သိက္ခာမဲ့ "ပြောက်ကျားနည်းဗျူဟာ" ကို အသုံးပြု. အနည်းငယ်သည်အခြား AASECT အဖွဲ့ဝင်များကတဆင့်တွန်းပို့ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ post: analysis: ဘယ်လို AASECT လိင်စွဲလမ်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Created ခဲ့။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးထံမှကောက်နုတ်ချက် လိင်စွဲလမ်းပေါ်ဒီကုဒ်ဒါ AASECT ရဲ့ "ရာထူးအာရုန်၏ blog post: အကျဉ်းချုပ်:
"နက်ရှိုင်းစွာခွေုံ" ဖြစ်ရန် "လိင်စွဲမော်ဒယ်" ၏တွေ့ရှိချက် AASECT ရဲ့သည်းခံစိတ်, 2014 ဒေါက်တာအာရုန်သည် AASECT ရဲ့ရာထူးကနေ "လိင်စွဲလမ်း" ၏အယူအဆအဘို့အထောက်ခံမှုပပျောက်ရေးထွက်သတ်မှတ်ထားပါ။ သူ၏ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်စေရန်, ဒေါက်တာအာရုန်ကိုတမင်တကာသူ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်အတူသဘောမတူကြောင်းရှုမြင်နှင့်အတူသူတို့အားဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် AASECT အင်္ဂါတို့တွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာကွဲကြမလုပ်ပဲ, နှငျ့ "လိင်စွဲ၎င်း၏ငြင်းပယ်ခံရဆီသို့အဖွဲ့အစည်းပဲ့ကိုင်နေစဉ်ထို့နောက်အတိအလင်းရှိသူများရှုထောငျ့အသံတိတ်ပြီ မော်ဒယ်။ [ဖောက်ပြန်သောသူငယ်, ပြောက်ကျား "ဟုဒေါက်တာအာရုန်သည်ထိုအသုံးပြီးဖြောင့်မတ်"လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ] အဘယ်သူ၏ဘဏ္ဍာရေးမက်လုံးပေးယုတ္တိဗေဒနှင့်အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်မှသူတို့အပေါ်မှာဆောင်ခဲ့ရာမှသူ့ကိုတားဆီးမယ်လို့လိင်စွဲမော်ဒယ် "" ဟာမှနောက်လိုက်၏ "အကျိုးအမြတ်စက်မှုလုပ်ငန်း" ဟုသူကဖွင့်မယ့်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြောင်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့် "နည်းပရိယာယ်။ အဲဒီအစား, AASECT ရဲ့တစ်ဦး "အမြန်အပြောင်းအလဲ" ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖို့ "စာတိုပေးပို့ရေး" ဟုသူကလိုလားတဲ့လိင်စွဲအသံရုပ်ပစ္စည်း AASECT ရဲ့သင်တန်းပြောင်းလဲမှု၏ဆွေးနွေးမှုတွင်ထည့်သွင်းမခံခဲ့ရကြောင်းသေချာစေရန်ရှာကြံလျက်နေ၏။
ဒေါက်တာအာရုန်၏ဝါကြွားအနည်းငယ်လျောက်ပတ်စွာအဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာပါတယ်။ ပြည်သူ့ခဲပညာရေးနှင့်သိပ္ပံနည်းကျဆွေးနွေးငြင်းခုံနှိပ်ကွပ်, ပြည်သူလူအများကြီးလျော့နည်းအတွက်မာနထောင်လွှားယူပါ။ ထိုသို့ဒေါက်တာအာရုန်ကိုသူအနိုင်နိုင် (မတိုင်မီလျှင်မပါ) ကဝင်ရောက်ပြီးနောက်တစ်နှစ် "နက်ရှိုင်းစွာခွေုံ" ယူဆထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအသိအမှတ်ပြု CST ဖြစ်လာဖို့အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကုန်ကြောင်းထူးဆန်းပုံရသည်။ ဘာမှပါကသူအတော်လေးသိသာ, မိမိဆန့်ကျင်ရှုမွငျခမြှင့်တင်ထဲမှာအလားတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိပါတယ်သောအခါ, က "လိင်စွဲမော်ဒယ်" ၌တစ်ဦးဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိခြင်းများအတွက်ပြေး "လိင်စွဲလမ်း" ကုသဝေဖန်သည့်အခါခွေုံပုံပေါ်သောသူဒေါက်တာအာရုန်သည်ဖြစ်ပါသည်
အများအပြားကဝေဖန်နှင့်ဝေဖန်မှုကြောင့်အမှန်တကယ်ကဘာလဲဆိုတာအဘို့အ AASECT ရဲ့ကွှေးကျွောခွငျးဖော်ထုတ်:
အခြားရွေးချယ်စရာအချက်အလက်: AASECT နှင့်ဆန့်ကျင်လိင်စွဲလမ်း Rant
လိင် / Porn စွဲပေါ်တွင် AASECT ရာထူးဖော်ပြချက်မှပျေါထှနျး Backstory
လိင်စွဲလမ်း၏ငြင်းပယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Clients တွေအနေနဲ့နှိပ်စက်တာ
AASECT သည် Sex & Porn စွဲမှုကိုလျှော့ချပြီးအဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
DSM-5 နှင့် ICD-11 Re: အ ဒုတိယ, ယားနောက်ဆုံး 2013 အတွက်၎င်း၏အဖြေရှာတဲ့ကို manual update လုပ်သည့်အခါ (DSM-5)ဒါကြောင့်တရားဝင်ဆွေးနွေးရန်အတွက်အစားဝင်ရောက်ခြင်း "အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ" ကိုစဉ်းစားကြဘူး "hypersexual ရောဂါ။ " ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အဆုံးစွန်သောထီးအသုံးအနှုန်းကပါဝင်ဘို့အကြံပြုခဲ့သည် DSM-5 ရဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်၏နှစ်ကြာလိင်လုပ်ငန်း Group မှပိုင်ဆိုင်တယ်။ သို့သော်တစ်ဦးဒသမနာရီ "ကြယ်ပွင့်အခန်းထဲက" session တစ်ခုအတွက် (ကသူ Work Group မှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအရ), အခြား DSM-5 အရာရှိများတဖက်သတ် hypersexuality ပယ်ချ, ယုတ္တိမတန်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကိုးကား.
ယင်းမှထို့အပြင်ရုံကြိုတင် DSM-5 ရဲ့ 2013, သောမတ်စ် Insel, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute ၏ထို့နောက်ဒါရိုက်တာအတွက်ထုတ်ဝေ က DSM အပေါ်မှီခိုရပ်တန့်ဖို့စိတ်ကျန်းမာရေးလယ်ကွင်းများအတွက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်သတိပေး။ ယင်း "အားနည်းခြင်းတရားဝင်မှု၏၎င်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်"ဟုသူကရှင်းပြသည်နှင့်"အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ စံသတ်မှတ်ချက်အရရွှေစံချိန်” အနေဖြင့် DSM အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ။"သူကဆက်ပြောသည်"NIMH ကွာ DSM category ထံမှ၎င်း၏သုတေသန re-orienting ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်s ။ " တနည်းအားဖြင့် NIMH သည် DSM တံဆိပ်များ (နှင့်သူတို့မရှိခြင်း) အပေါ် အခြေခံ၍ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းသုတေသနကိုရပ်တန့်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလာမည့်ယား၏ရွေ့လျားနေကြသည်။ အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များနှင့်များ၏စွဲသုတေသီများ စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) စွဲသုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာအပေါ်အခြေခံပြီးသြဂုတ်လ 2011 အတွက်ညစ်ညမ်း-စွဲဆွေးနွေးငြင်းခုံအခေါင်းအတွက်နောက်ဆုံးလက်သည်းပါပြီသငျ့သညျအဘယျသို့ထု။ ASAM မှာထိပ်တန်းစွဲကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့ရဲ့ဖြန့်ချိ စွဲလမ်း၏ဂရုတစိုက်ထွင်းထုနှင့်အဓိပ္ပါယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများလုပ်ပေးအဖြစ်ဗွေဆော်, အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောအခြေခံနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေ။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, စွဲလမ်းများစွာကိုမရ, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တဦးတည်းရောဂါ (ခွအေနအေ) ဖြစ်ပါသည်။ ASAM က“ အတိအလင်းပြောတာကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲ "တည်ရှိ နှင့်သေချာပေါက်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းတှငျတှေ့တူညီတဲ့အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားရမည်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်ဖြစ်ရပ်မှာ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ လက်ယားရဲ့အလွန်အကျွံသတိသတ်မှတ်ထားရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ ယင်း၏အဖြေရှာတဲ့ manual ၏နောက်တစ်နေ့ထုတ်ဝေခြင်း, ICD, 2018 ထွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၏ beta ကိုမူကြမ်း အသစ်က ICD-11 "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" အတွက်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါဝင်သည် အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် "ဘို့တစွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေကြောင့် disorders။ " အဘယ်ကြောင့်အဖွဲ့အစည်းသုံးခုကဒီအရေးကြီးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖော်ပြနေတာလဲ။
အဆိုပါကွှေးကျွောခွငျးရဲ့ဒုတိယအဓိကအခိုင်အမာအရေးဆိုမှု (B) မှ
ခ) "တစ် ဦး စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံလက်ရှိလေ့လာမှုများတိကျသောအဓိပ္ပာယ်နှင့်အတိုင်းအတာများတိကျခိုင်မာစွာမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုဒေတာအပေါ်အားကိုး။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအပြောင်းအလဲများအတွက်အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့်ယခင်ရှိပြီးသားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကို အသုံးချ၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော extraneous variable များကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည် (Ley et al ။ , 2014) ။ အချို့လူများက (မျှော်လင့်ရမည့်) လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းတွင် dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုတိုးပွားလာမှုသည်စွဲလမ်းမှုအတွက်သက်သေသာဓကဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာယူဆနိုင်သော်လည်း Prause, Steele, Staley, Sabatinelli နှင့် Hajcak (2015) သည် ၄ ​​င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့်လေ့လာမှုတွင်တွေ့ရသော hypersexual ပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း အခြားလူသိများသောစွဲများနှင့်တူညီသောအာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပုံစံများကိုမပြခဲ့ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းတွင်လူတို့ပါ ၀ င်နိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်များစွာနှင့်အမူအကျင့်များကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်မကြာခဏနှင့်မတူကွဲပြားသည့်လိင်မှုကိစ္စများ (Ley, 2012; Ley et al ။ , 2014) ရှိသည်။ "
လိင်နှင့် porn စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည် (မှအပ) အလွန်တိကျခိုင်မာသည် Prause ရဲ့2EEG လေ့လာမှုများ), သူတို့ထဲကအတော်များများဟာကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်စွဲအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်အချို့တို့ကပြုနေကြသည်။ ဒီမှာပါ။ 52 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ.
အဆိုပါကွှေးကျွောခွငျးရဲ့အကြံပြုချက်က "ဆက်စပ်မှုဒါဟာလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်မဆိုအမျိုးအစားစွဲသွေးဆောင်သိက္ခာမဲ့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ် "သုတေသနအသုံးမကျပြန်ဆို, ထူးခြားတဲ့အဝိဇ္ဇာ (သို့မဟုတ်လှည့်ဖျား) ဖော်ပြသည်။ အပြင်က porn စွဲအားလုံး porn / လိင်-စွဲဘာသာရပ်များအပေါ်တိကျခိုင်မာစွာဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တက်ဖေါ်ပြခြင်းသမျှသောအဓိကစွဲ-စေသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့အကြံပြုဖို့ရီစရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေးသာမှုကဘာတွေလဲ? သုည။ ဥပမာ, core ကိုစွဲ-စေသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည် ာင်း, အရာသာစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုနှင့်အတူဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
အဆိုပါကြေညာချက်ကြေညာချက်ရဲ့အာရုံကြောသုတေသန mischaracterizing "၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖြစ်dopaminergic လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှု"ဒီကွှေးကျွောခွငျး၏စာရေးဆရာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လေ့လာမှုများမဆိုစာမဖတ်ဘူးသောဖော်ပြပါ။ အဆိုပါအာရုံကြောလေ့လာမှုများအဘယ်သူအားမျှ dopamine လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်! ) 3: မယ့်အစား, အ 1 တစ်ဒါဇင်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်လေးပါးကိုအဓိကဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ရှေ့မှောက်တွင်အကဲဖြတ် အသိ, 2) Desensitization, 3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် ) (အလုပ်အမှုဆောင်လည်ပတ်ဆင်းရဲတဲ့), နှင့်4အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4သည့်ကြားတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲလမ်းအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံ -based လေ့လာမှုများ 54:
ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်အထိခိုက်မခံခြင်း (cue-reactivity & cravings) သတင်းပို့ခြင်းလေ့လာမှုများ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက် (သည်းခံစိတ်အတွက်ရရှိလာတဲ့) desensitization သို့မဟုတ်လေ့သတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် functioning (hypofrontality) သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲများတွင်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲတစ်ခုအလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုညွှန်ပြလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5.
ကြေငြာချက်၏ပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော Prause et al ။ , 2015?
"Prause, Steele, Staley, Sabatinelli နှင့် Hajcak (2015) ကသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှုမှာ hypersexual ပြproblemsနာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့သူတွေကတော့အခြားလူသိများတဲ့စွဲလမ်းမှုတွေနဲ့တူညီတဲ့အာရုံကြောတုန့်ပြန်မှုပုံစံများကိုမပြခဲ့ဘူး"
"အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုပုံစံများာင်း - အဓိကစွဲဦးနှောက်အပြောင်းအလဲထုတ်ဖော်ပြသရာ ", cue-reactivity ကို" ကိုဆိုလိုသည် "။ သငျသညျအထကျပါကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, cue-reactivity ကို, အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, သို့မဟုတ်မတရားသောနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအပေါ် 27 လေ့လာမှုများယခုရှိပါသည်။ အဆိုပါကွှေးကျွောခွငျးဖွစျကွောငျးမှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်ရင်တောင် Prause et al ။ , ၂၀၁၅ ၏တွေ့ရှိချက်များသည် cue-reactivity တည်ရှိမှုကိုအမှန်တကယ်ဆန့်ကျင်သည် (မအောင်မြင်ပါ) ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ခုထက် ပို၍ ကြာလိမ့်မည် (နှင့်ချို့ယွင်းချက်) အမူအကျင့်စွဲသုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာ "debunk" ကိုလေ့လာမှု!
ထိုအများ၏အမှန်တကယ်ရလဒ်တွေကိုအဘယျသို့ခဲ့ကြသည် Prause et al ။ , 2015? ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီး“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြindividualsနာများကြုံတွေ့ရသူများ” ရှိခဲ့သည် အနိမ့် vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်နှင့်ထိတွေ့ရန်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ အဆိုပါ စာရေးဆရာများ ဤရလဒ်များကို "ညစ်ညမ်း porn စွဲ။ " သို့သျောလညျး, အဖြစ်မှန်အတွက်၏တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat (2014), တစ် ဦး စွဲ -related ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှု - ပို porn အသုံးပြုမှု vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်အတွက်လျော့နည်း ဦး နှောက်ကို activation နှင့်ဆက်စပ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Prause et al ။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုထိန်းချုပ်သည့်အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် vanilla porn ၏ပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ ၎င်းတို့သည်ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည် (လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း) သည်အလုပ်ခွင်တွင်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏သက်သေသာဓကဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ အဆိုပါ သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
ဂ)“ လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုပုံစံသည်သိသိသာသာလူမှုယဉ်ကျေးမှုဘက်လိုက်မှုများကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည် (Klein, 2002; Williams, 2016)၊ လက်တွေ့အကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာတိကျသောတိုင်းတာမှုများအပါအဝင် Joannides, 2012) ။ လူမှုယဉ်ကျေးမှုဘက်လိုက်မှုများတွင်ပုံမှန်လိင်မှုကိစ္စ၊ ဆက်ဆံရေးပုံစံများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်အလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယူဆချက်များပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိသည့်သူများသည်လိင် / ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံသူများသည်ထပ်မံပစ်ပယ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။ ”
တစ်ဦးတည်းသာအထက်ပါအညွှန်းစာ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖြစ်ပါသည်: Williams က, 2016 ။ ဒါဟာရည်ညွှန်း PubMed မဟုတ်သောအသေးအဖွဲလူမှုရေးအလုပ်ဂျာနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအာရုံကြောလေ့လာမှု Williams က ခဲ့ကိုးကား, သင်ကမှန်းဆ, Prause et al ။ 2015။ ဝီလျံ, 2016 အပေါ်မူတည်တဲ့တဖက်သတ်အမြင်အပိုင်းအစဖြစ်ပါသည် Prause et al။ ၎င်း၏ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုများအတွက် 2015 နှင့်ဒါဝိဒ် Ley ရဲ့စာအုပ်များနှင့်ဆောင်းပါးများကို။ ဒါဟာလျစ်လျူရှု 51 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူများကပေါ်, 25 မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်နှင့် 110 လေ့လာမှုများ ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြ&နာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကျေနပ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Wiiliams, 2016 ဗလာအပြောအဆိုထက်ပိုပြီးအချည်းနှီးဖြစ်၏။
))“ သုတေသနပြုချက်များအရဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုတို့သည်လိင် / ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ပြင်းထန်သောလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂရော့ဘ်စ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅) ကအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်တိုင်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုတို့သည်အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု၏ပြင်းထန်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားသုတေသီများကအလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြခဲ့ကြသည် (Abell, Steenbergh, & Boivin, 2010; Kwee, Dominguez, & Ferrell, 2015; Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen, 2006) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သောမတ်စ် (၂၀၁၃၊ ၂၀၁၆) သည် ev ၀ ံဂေလိခရစ်ယာန်များအကြားစွဲစွဲလမ်းမူဘောင်၏ဖန်တီးမှုနှင့်ဖြန့်ကျက်မှုကိုခြေရာခံရန်မော်ကွန်းတိုက်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခြားပညာရှင်များကလိင်စွဲလမ်းမှုသဘောတရားသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုလူမှုရေးအရရှေးရိုးစွဲတုံ့ပြန်မှုအဖြစ် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးဆေးဝါးနှင့်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုမြင်သာမှုအပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်လက်ခံမှုရရှိခဲ့သည် (Reay, Attwood, & Gooder, 2007; Voros, 2017) ။ "
တကယ်တော့လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ပါသည် မဟုတ် အမျိုးသားများတွင်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်စပ်သော။ ပထမဦးစွာ လေ့လာမှုများ၏သဘောအရဆိုလျှင် (ဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများသတင်းပို့လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4, လေ့လာမှု 5, လေ့လာမှု 6, လေ့လာမှု 7, လေ့လာမှု 8, လေ့လာမှု 9, လေ့လာမှု 10, လေ့လာမှု 11, လေ့လာမှု 12, လေ့လာမှု 13, လေ့လာမှု 14, လေ့လာမှု 15, လေ့လာမှု 16, လေ့လာမှု 17, လေ့လာမှု 18, လေ့လာမှု 19, လေ့လာမှု 20, လေ့လာမှု 21, လေ့လာမှု 22, လေ့လာမှု 23, လေ့လာမှု 24).
ဒုတိယအချက်မှာကုသမှု-ရှာကြံအထီးလိင်စွဲအကဲဖြတ်နှစ်ခုလေ့လာမှုများစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ, ဒီ ကုသမှု-ရှာကြံ porn စွဲအပေါ် 2016 လေ့လာမှု ကြောင်းစျယာနျဘာသာတရားကိုတွေ့ရှိခဲ့ မပတျသကျဘူး လိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောလက္ခဏာများသို့မဟုတ်ရမှတ်များနှင့်အတူ။ ဤ ကုသမှု-ရှာကြံ hypersexuals အပေါ် 2016 လေ့လာမှု တွေ့ရှိရ အဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေး ဘာသာရေးကတိကဝတ်များနှင့် hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးဆက်များ၏ Self-အစီရင်ခံအဆင့်ဆင့်အကြား။
စာရိတ္တနှင့် "ရိပ်မိစွဲလမ်း" (ပုကွှေးကျွောခွငျးရဲ့ကောက်နုတ်ချက်စာရင်းဝင်နီးပါးအပေါငျးတို့သလေ့လာမှုများ) ကိုရည်မှတ်တောင်းဆိုမှုများကြောင့်အသစ်တခုလေ့လာမှုသူတို့ကလက်ခံကြသည်အကြံပြု: ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring. ဤသည်လေ့လာမှုအသစ် Grubbs အပေါင်းတို့သည်သူ၏လေ့လာမှုများ, CPUI-9 အတွက်အသုံးပြုသည်ထိုတူရိယာ, ချို့ယွင်းချက်ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါ CPUI-9 ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းအပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲအကဲဖြတ်3ဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးမေးခွန်းများကို, ပါဝင်သည် ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည် '' CPUI-9 ရမှတ်များအထက်သို့ skewed ခံရဖို့လေ့။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသော CPUI-9 ရမှတ်များရှိနေခြင်းကိုမီဒီယာများသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ဘာသာရေးကလူမဟုတ်မမှန်သူတို့ porn စွဲဖြစ်ကြသည်ယုံကြည်။ "ဒီအတော်ကြာလေ့လာမှုများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် CPUI-9 ရမှတ်များနှင့်အတူ correlating ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဘာသာရေးကလူစုစုပေါင်း CPUI-9, (အရှင်) ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းနှင့်ကတည်းက ဒါကြောင့်အသံထွက်ခဲ့သည် ဘာသာရေး-based ကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏ယင်းကြောင်း (အမှန်တကယ်ထောက်ခံမှုမပါဘဲ) စစ်မှန်တဲ့ ညစ်ညမ်းစွဲ၏အကြောင်းမရှိ။ ဒါကတော်တော်လေးခုန်နှင့်သိပ္ပံများ၏ကိစ္စအဖြစ်ညျမတရားမှုပါပဲ။
ထို့အပြင် CPUI-9 အားဖြင့်မွေးထုတ်အဆိုပါသုံးသပ်ချက်နှင့်တောင်းဆိုမှုများရိုးရှင်းစွာမမှန်ပါ။ Grubbs မနိုင်တစ်မေးခွန်းလွှာ created နှင့် အမှန်တကယ်စွဲကနေ "ကိုရိပ်မိ" sorting များအတွက်အတည်ပြုဘယ်တော့မှခဲ့သည်: အ CPUI-9 ။ နှင့် သုညသိပ္ပံနည်းကျမျှတမှု he Re-တံဆိပ်ကပ် သူ၏ CPUI-9 သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းနေသောမေးခွန်းပုံစံဖြစ်သည်။ အများကြီးအဘို့, အများကြီးပိုတွေ့မြင် "လေ့လာမှုအသစ် "ကိုရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ" ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းစွဲ (9) ဖြစ်စေအကဲဖြတ်ရန်တစ်ခုတူရိယာအဖြစ် Grubbs CPUI-2017 invalidates။ "
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်တွေ့ရသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်“ လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုတွန်းအားပေးနေသောအုပ်စုများသည်ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသာဖြစ်သည်” ဟူသောအခိုင်အမာပြောဆိုချက်သည် ၃ ဒါဇင်ကျော်ကျော်ကိုရှင်းပြရန်လိုအပ်နေသေးသည် အာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲထဲမှာစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံ။ ၏အလငျး၌ porn အသုံးပြုမှု / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်သူတို့လည်းနီးပါးကိုရှင်းပြဖို့လိုအပ် နုပျို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် 1000% မြင့်တက် porn ပြွန်ဆိုဒ်များထွန်းကတည်းက။
အဆိုပါကွှေးကျွောခွငျးရဲ့ပဉ္စမအဓိကအခိုင်အမာအရေးဆိုမှု (E) နဲ့
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကွှေးကျွောခွငျးအခိုင်အမာ2specious "ကောက်ရိုးလူ" အငြင်းပွားမှုများပေါင်းစပ်:
အီး) ကလိင် / ညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေစွဲတစ်ခုညွှန်ပြချက်တွေဟာပေမယ့်လိင်တစ်ဦးအပြုသဘောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားမထားဘူးကြောင်းယူဆတယ်။
အဆိုပါလိင် / ညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်မျှထိုကဲ့သို့သောယူဆချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာအလေးအနက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့၏အပြုအမူမထိန်းချုပ်နိုင်သူလူတို့နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်၏အလွန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် "ဖြေရှင်း။ "